Macroeconomics | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Gịnị bụ ọdịiche dị n’etiti echiche nke “akụ” na echiche nke “ihe emepụtara”?
Gịnị bụ ọdịiche dị n’etiti echiche nke “akụ” na echiche nke “ihe emepụtara”? N'uche kachasị, akụrụngwa (nke sitere na French. Ressource inyeaka ego) bụ ego, ụkpụrụ, ebuka, ohere, ụzọ esi enweta ego, ego. A na-ahụkarị ya…
Kedu ihe dị nkenke?
Kedu ihe dị nkenke? Vs dị mfe. Nkọwa (site na Bekee) nkenke nkwekọrịta dị mkpirikpi n'etiti onye mgbasa ozi na onye mgbasa ozi, nke na-akọwa isi ihe nke mgbasa ozi mgbasa ozi n'ọdịnihu. Akwụkwọ nkenke (German) bụ ihe dị ka ...
Ego ole ka dollar ahụ gbakwunyere n'afọ 20 ikpeazụ? Ị nwere ike ide na percentages ma ọ bụ kọwaa dị iche iche.
Ego ole ka dollar dakọbara n'ime afọ 20 gara aga? You nwere ike dee na narị ma ọ bụ kọwaa iche. Mkpụrụ okike enwebeghị ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere nrụda. Ghọta nrụpụta bụ mbelata ikike ịzụta ihe "greenback" ...
ihe ndị bụ isi nke ọnọdụ akụ na ụba. ya uru na ọghọm ??
njirimara mbu nke aku na uba. uru na ọghọm ya ??? 1st gbakwunyere: Ihe gbakwunyere nke ngwakọta akụ na ụba bụ ngwakọta nke ụdị usoro akụ na ụba atọ (ọdịnala, etiti, ahịa)
kedu ihe bụ monetization?
Gịnị bụ monetization? Onweghi okwu di otua. Enwere "monetization". Jiri ego dochie uru ebumpụta ụwa. Egosiputa monetization na ntinye edemede. Achọtara m nkọwa a na saịtị http://www.newslab.ru/blog/153095: Kedu ka…
Enwere m nsogbu. Enweghị m ike ịghọta ihe amortization? Biko, ọ bụrụ na i nwere ike iji ihe atụ.
Enwere m nsogbu. Aghọtaghị m ihe ọnụ ahịa bụ? Biko, ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ihe atụ. Dịka m siri ghọta ya, ịbelata ego bụ ihe dị oke ọnụ na mmepụta, ọnụọgụ ego mbata,…
Ọnọdụ akụ na ụba. Enyemaka biko nye ihe atụ nke ihe ndị na-abụghị ọnụahịa nke ọkọnọ na ịchọrọ n'ọdịnihu ekele
Akụ na ụba. Biko nye aka ka inye ihe atụ nke ihe na - adịghị ọnụ ahịa ọkọnọ ma n’ebughi ụzọ maka ọkọnọ, ọ bụghị ọrụ ọnụahịa nke ọkọnọ ma chọọ - ndị a nwere ike bụrụ ọrụ ọsịsọ nke ọnọdụ dị oke mkpa (ọrụ ebere, enyemaka mmadụ), wdg.
Ego ole ka ha nọ na bitcoin?
Olee Satoshi n'otu Bitcoin? Anụ kreenu si 1000 ka 3000 10-Satoshi ise ọ bụla nkeji https://satoshinow.com/?ref=145535 The kasị mma n'ezie Satoshi na ndị ọzọ na kaadị ego, a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke taps https://yobit.net/?bonus=EhArY ezigbo kreenu . ...
Nyere, biko, ịchọta ihe atụ na ụzọ ụfọdụ, nke a na-eji mee ihe n'ime usoro akụnụba
Nyere, biko, ịchọta ihe atụ na ụzọ ụfọdụ, nke eji eme ihe n'usoro akụ na ụba n'ime usoro. E jiri ya mee ihe na nyocha, ya bụ nwepụta echiche nke mbido nke ihe a na-enyocha n'ime akụkụ ahụ, ...
Kedu ihe bụ monopsony?
Gini bu anumanu? Monopsony bu udi ahia ebe obula n’ere ahia, ahia ma obu ihe egosiputara. Karịchaa, ọnọdụ dị na ụlọ ọrụ na-akpata ego na ahịa, ebe…
Depụta isiokwu nke ego na ego nke ụtụ isi obodo.
Detuo ihe ndị ha na-akpata na ego ha na-emefu n’obodo a. Agabiga na mahadum, - m na-ede ihe na ebe nchekwa - Dị ka edemede nke 49 nke koodu mmefu ego nke Russian Federation 1, ego ụtụ isi nke mmefu ego gọọmentị gụnyere: -ọbụbụ…
Kedu ụlọ ọrụ MICRO-MEDIA?
Gini bu MICROSENTER nke ulo oru? Gburugburu ụwa ụlọ ọrụ bụ ọnọdụ dị n'ime ma ọ bụ ozugbo, ihe na ike nke ụlọ ọrụ na-ekpebi ihe ọ ga-eme. Isi ihe nke M. P. bu - nhazi nke ulo oru; ndị na-eweta ngwá ahịa; ndị na-ajụ ase; klọọkụụ ndị asọmpi;…
Ego na enye ego. Ụkọ Fischer
Inye ego na ego. Iszọ Fisher Mpempe nke na-akọwa itule n'etiti oke ego na mgbasa yana ọsọ nke mgbasa ha, n'otu aka, ọnụahịa ọnụahịa na olu nke azụmahịa - ...
Ònye na-enweta na Forex? ? Ọ dị adị?
onye n’eme ahia azumahia. ? ọ bụ ezigbo ?? nke a bụ eziokwu, n'agbanyeghị na enwere nhọrọ ịntanetị azụmahịa ka mma. Dee. On mebere - nkuzi ọzụzụ - ị ga -eweta mkpịsị ụkwụ aka ekpe na ihuenyo nke ileba anya gị ...
Kedu ebe dị n'ụwa nke Russia bi na ịchekwa mmanụ na gas?
Kedu ebe dị n'ụwa nke Russia bi na ịchekwa mmanụ na gas? Dị ka akwụkwọ akụkọ Russia si kwuo, Russia nwere ihe karịrị 10% nke mmanụ mmanụ, na-ebi na 2 ebe n'ụwa ...
Kedu ihe bụ nraranye ahụ?
Kedu ihe bụ nraranye ahụ? ememe nraranye nke isi obodo. Okwu ya na usoro ochichi nke ndi ochichi. Ihe nraranye bu ihe omuma di iche iche nke obodo, emeziri iji mesie ike na oru nke ulo oru kachasi elu ...
Dee ma kọwaara m ihe gbasara usoro ịkọpụta ọnụ ahịa ahịa nke ndị na-ere ahịa na onye na-akwụ ụgwọ GDP
Biko dee ma kọwaa m usoro iji gbakọọ ndepụta ọnụahịa nke onye ahịa na onye na-agbachitere GDP.Ọdịdị ka mma, Usoro Ahịa Ahịa na-egosi mgbanwe na ọkwa ọnụahịa nke “nkata” nke ngwongwo na ọrụ a na-erip…
Kedu ihe bụ COKE COAL na ihe dị na ya?
Kedu ihe bụ COX COAL yana gịnị ka ọ dị? Kol na-enweta ihe eji enyere ndụ aka, ma ihe niile bụ ike na-enye aka na mgbasa ahịa ndị ahịa n'obodo ọ bụla. Ma ọ bụ ibubata ma ọ bụ mbupụ .. Coke - ...
mba na transnationalization, kedu ihe dị iche?
Ntughari uche na ngbasa ozi gbasara Gini bu ihe di iche? Ationwapụta na ịkọgharị ụwa bụ ihe dị mkpa na mmepe nke akụ na ụba ụwa. E nwere nkọwa dị iche iche nke okwu a “njikọ mba ụwa”. Nhazi mba ụwa bụ usoro itinye aka dị omimi na arụmọrụ mba ofesi ...
Kedu ihe nchịkọta ego nke M1, M2, M3
Gịnị bụ ego aggregates M1, M2, M3 .Sformiruyte data dị ego aggregates M1, M2, M3. Ego na na ugbu a akaụntụ 800ed akụ. Nyochaa 120 nkeji Ego igwe 100ed. Obere ...
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,459.